ဗဟုသုတ - Shenzhen Okacc Industrial Co., Ltd.
2022-04-20 သတင်း / ဗဟုသုတ
Lexus Is300h Battery ကို ဘယ်လို အစားထိုးမလဲ။ Lexus Is300h Battery ၏ဘက်ထရီကို မည်ကဲ့သို့ အစားထိုးရမည်ကို သင်အံ့သြနေပေမည်။ ကောင်းပြီ၊ ဤသည်မှာ သင့်အား ငွေချွေတာရန် ကူညီပေးမည့် အဆင့်အချို့ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ အနှုတ်လက္ခဏာကို မချိတ်ဆက်ခင်မှာ positive terminal ကို ဖြုတ်ထားဖို့ သေချာပါစေ။...
Hybrid ကားများတွင် မည်သည့်ဘက်ထရီအမျိုးအစားကို အသုံးပြုသနည်း။ ယနေ့ခေတ် ဟိုက်ဘရစ်ကားများတွင် မည်သည့်ဘက်ထရီအမျိုးအစားကို အသုံးပြုနေကြသနည်း။ ကိုဘော့ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၊ နီကယ်-သတ္တု ဟိုက်ဒရိုက် သို့မဟုတ် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းများသည် အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားများဖြစ်သည်။ နီကယ်-သတ္တုဟိုက်ဒရိတ် ဤဘက်ထရီကို ဟိုက်ဘရစ်ကားများနှင့် ဆယ်လူလာဖုန်းများတွင် အသုံးများသည်။ မူလက aerospace applications တွေမှာ သုံးတဲ့...
2022-04-20 ဗဟုသုတ / သတင်း
Toyota Hybrid ဘက်ထရီများသည် မည်မျှကြာကြာခံနိုင်မည်နည်း။ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်၊ အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုများထဲမှတစ်ခုမှာကား၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ ဟိုက်ဘရစ်ဘက်ထရီသက်တမ်းသည် ကား၏ကျန်းမာရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ သင့်လျော်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် မတော်တဆမှုများကို ရှောင်ရှားခြင်းသည် ဘက်ထရီကို ကောင်းမွန်သောပုံသဏ္ဍာန်နှင့် သက်တမ်းတိုးစေရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်...
Hybrid ဘက်ထရီများ - Hybrid ဘက်ထရီများ သိထားရန် လိုအပ်သမျှ - ၎င်းတို့သည် အဘယ်နည်း။ ဟိုက်ဘရစ်ဘက်ထရီများသည် ပေါ်လီမာဖလင်ဖြင့် ပိုင်းခြားထားသော ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီ၏ အထုပ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် လျှပ်စစ်မုဒ်တွင် လည်ပတ်နေချိန်တွင် ၎င်းတို့အား ပြင်ပပါဝါရင်းမြစ်မှ အားပြန်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သင်လုပ်သင့်သည့်အချက်အချို့ရှိပါသည်...
Cayenne Hybrid ဘက်ထရီ အစားထိုးရန် ခက်ခဲပါသလား။ အကယ်၍ သင်၏ Porsche Cayenne ပေါင်းစပ်ဘက်ထရီသည် လုံးဝကုန်သွားပါက၊ အစားထိုးရနိုင်သလားဟု သင်တွေးတောနေပေမည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် ဘက်ထရီမကောင်းခြင်း၏ လက္ခဏာများနှင့် Cayenne ကို မည်သို့စမ်းသပ်ရမည်ကို ရှင်းပြပါမည်။
Porsche cayenne hybrid ဘက်ထရီ အဆင့်မြှင့်တင်မှု ကုန်ကျစရိတ် ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ Porsche Cayenne ဘက်ထရီအသစ်၏ ကုန်ကျစရိတ်သည် ကား၏အရွယ်အစားနှင့် ဘက်ထရီအရွယ်အစားပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် သင်၏ Porsche Cayenne ဘက်ထရီကို အစားထိုးရန် လိုအပ်သည်ဆိုသည်ကို မည်သို့ပြောပြရမည်ကို ရှင်းပြထားသည်။ ထို ... ဖြစ်မည်…